Izixhumanisi ezikhohlakele eZwini naku-Excel > UVielhuber David
Izixhumanisi ezikhohlakele eZwini naku-Excel06
Umuntu angacabanga ukuthi lapho uvula ama-hyperlink asuka kudokhumenti ye-Word / Excel, isiphequluli esijwayelekile siqala nge-URL oyifunayo. Ngokumangazayo, lokhu akunjalo - okuholela emiphumeleni emibi futhi kwenza izixhumanisi zamakhasi avikelwe ukungena ngemvume / asekelwe kumakhukhi kuzinhlelo zeHhovisi ezingeke zenzeke.
Lokhu kungenxa yemodyuli eqanjwe yiMicrosoft ebizwa nge- "User Agent: Microsoft Office Existence Discovery", elayisha kuqala isixhumanisi ngemuva bese ilandelela noma yikuphi ukuqondiswa kabusha. Inkinga ingazanywa kabusha ngokulandelayo: Okokuqala udala amafayela amabili aqanjwe ngokuthi "loggedin.php" (ikhasi lesimo sokungena ngemvume) kanye ne- "login.php" (ikhasi lokungena ngemvume):
Ngemuva kokubiza u- "loggedin.php" ngqo, ufika ngqo ku- "login.php" kusimo sokuqala, lapho ikhukhi le- "logged_in" lisethwe khona manjalo. Ngemuva kokuphinda ubize u- "loggedin.php", uthola umlayezo "ungene ngemvume ku ". Uma uxhuma ku-" loggedin.php "ngaphakathi kweZwi noma i-Excel (inguqulo 2007 noma kamuva), uzohlala ufika ngqo ku-" login.php ", noma ngabe usungenile noma cha.
Izinhlelo zeHhovisi ziqala ingxenye ye-Internet Explorer ngemuva ukubheka ukuthi i-URL ikhona yini. Noma yikuphi ukuqondiswa kabusha kulandelwa kuze kube sekupheleni futhi i-URL yokugcina ngaphandle kokuqondisa kabusha (esimweni sethu "login.php") iyabuyiselwa futhi ibizwe ngesiphequluli esijwayelekile. Isixazululo esikhona ukukhipha nokuvimba ikholi yangemuva ekhasini lokuqala: